रुपा सुनार घ’टना: ‘विप्लव’ नेतृत्वको युवा संगठनकोले गरे कारबाही गर्दै | समाचार
रुपा सुनार घ’टना: ‘विप्लव’ नेतृत्वको युवा संगठनकोले गरे कारबाही गर्दै
June 28, 2021 NepstokLeaveaComment on रुपा सुनार घ’टना: ‘विप्लव’ नेतृत्वको युवा संगठनकोले गरे कारबाही गर्दै
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको युवा संगठनले रुपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घ’टनालाई लिएर भत्र्सना गर्दै पिड’कलाई कार’बाही गर्न माग गरेको छ।
असार १२ गते विप्ल’वको युवा संगठन उपत्यका विषेश व्यु’रोले विज्ञ’प्ती जारी गर्दै जातीय विभेद जस्तो अमानविय व्यवहार गर्ने सरस्वती प्रधानलाई कानुन बमोजिम कार’बाही गर्न मा’ग गरिएको छ।
उपत्यका विषेश व्यरो संयोजक प्रविनले असार १२ गते घ’टनाको भत्र्स’ना गर्दै विज्ञ’प्ति जारी गरेका छन् । यता,जातीय वि’भेदको आरो’पमा प’क्राउ परेकी ५८ वर्षीया सरस्वती प्रधान भने रि’हा भएकी छिन् । उनी ईमेज टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रूपा सुनारलाई जातका कारण आफ्नो घरको कोठा भाडामा दिन नमानेको आरोपमा प’क्रा’उ परेकी थिइन।
साथमा-नबिल बैंकको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भएको छ । सबैभन्दा बढी मुनाफा वितरण गर्नको साथै हालसम्म प्रतिशेयर वितरणयोग्य मुनाफा पनि यही बैंकको सबैभन्दा धेरै छ । कम्पनीको प्रतिशेयर वितरणयोग्य मुनाफा २८ दशमलव २१ रुपैयाँ पैसा छ ।
यसैगरी, यो अवधिसम्म सबैभन्दा कम वितरणयोग्य मुनाफा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको रहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २२ करोड २९ लाख रुपैयाँमा रोकिएको छ । बैंकहरुले वितरणयोग्य नाफाबाहेक शेयर प्रिमियम, जगेडामा रहेको रकमसमेत प्रयोग गरेर लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् ।
जुन यहाँ गणना भएको छैन र गणना भएको खण्डमा लाभांश क्षमता बढ्न सक्छ । हाल नबिल बैंक र युनाईटेड फाइनान्स तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका बिच मर्जर र एक्विजिसनको काम हुँदैछ जसकारण यी कम्पनीहरुको शेयर संरचना र लाभांशमा परिवर्तन हुनेछ । हाल मर्जरको प्रक्रिया भइरहेको कारण हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दोस्रोबजार कारोबारमा भने रोक्का लाइएको अवस्था छ ।
विशालबजार नजिकै दिउसै ८ वर्षीया बालिकालाई भएको घटना स्थानियले छतवाट देखेपछि…..
प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै पुन राजसंस्था फर्काउने पक्का ! राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने जतिले सेयर गरौं !
टिकटक बनाउने क्रममा…….
आज चर्चित हाँस्यकलाकार माग्ने बुढाको जन्मदिन, यसरी मनाए [भिडियो]